४० बर्षे यी शिक्षिकाको खुल्यो यस्तो कर्तुत : यसरी कलिला विद्यार्थीबाट यौन प्यास मेटाउथिन् ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ४० बर्षे यी शिक्षिकाको खुल्यो यस्तो कर्तुत : यसरी कलिला विद्यार्थीबाट यौन प्यास मेटाउथिन् !
काठमाडौं । विद्यालय विद्यार्थीका लागि भविष्य निमार्णको आधार हो । उनीहरुका लागि मन्दिरपनि त्यही हो आधा घरपनि त्यही हो । तर समय समयमा यही पवित्र स्थलमा गरेका काला कर्तुत बाहिर आउँने गर्दछन् ।
यौनसम्पर्कका लागि मानिस के सम्म गर्न सक्न त्यसको पछिल्लो उदाहारण बाहिर आएको छ । जहाँ एक शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर दिन र उच्च अंकका साथ उतिर्ण गराउँने भन्दैं यौनसम्बन्ध राखेको खुल्न आएको छ । उनको नाम योकसाता हो उनी ४० वर्ष भन्दा धेरै उमेरकी भइन् । विशेषज्ञहरुका अनुसार यो उमेर समुहका महिलाहरुमा यौन इच्छा धेरै हुन्छ उनीहरु आफु भन्दा कम उमेरका केटाहरुसँग सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् ।
उनी १६ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरुको नम्बर लिने गर्थिन । सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सऐपमार्फत उनीहरुसँग च्याट गर्ने गर्थिन् । उनी आफ्ना विद्यार्थीहरुसँग अश्लील कुरा गर्ने देखि तस्वीर पठाउने सम्मका काम गर्थिन् ।
विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा पढाउने बहानामा बोलाएर यौनसम्बन्ध राख्ने गर्थिन् । उनले विद्यार्थीहरुलाई आफसँग यौनसम्बन्ध नराखेमा परिक्षामा फेल गराईदिने धम्की पनि दिने गरेको खुल्न आएको छ । एक दिन एक विद्यार्थीका पिताले छोराको मोबाइल चेक गर्दा यि शिक्षिकाको कालो कर्तुत बाहिर आएको हो ।
उनी आफुले गर्ने गरेको काम कसैंलाई नभन्न भनेर विद्यार्थीलाई चेतावनी दिने गर्थिन । विद्यार्थीलाई ब्याकमेल गरेको आरोपमा उनलाई ४० वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । एजेन्सी